Caaga Snow Majarafad la Xidho Strip - Shiinaha Richina
Qaabeeyaan No .: H320
Head Size: 320 * 400mm
Length Guud: 1200mm
Wax soo saarka: 300000pcs bil kasta
Gaadiidka: Ocean, Air
Supply Kartida: 100000pcs bil kasta
barafka guud dhererka 1200mm
Snow Majarafad 320-400mm size madaxa, PP wax daab la xoojiyo fibs.
Majarafad Snow la Powder dahaarka xamili tube steel la xajin xumbo
Raaxo D-qaab xajin
Snow Majarafad Blades iyo gacanka ku xiran by fur.
qarkiisa Aluminum waarta si loo kordhiyo jarida nolosha awood iyo qalab
(Ikhtiyaar u ogolaanaya aluminium / qoryo / xamili firberglass)
Raadinta fiican Poly Tools Snow saaraha & qeybiyaha? Waxaan leenahay xulashada ballaaran ee qiimaha weyn inuu kaa caawiyo inaad hesho hal abuur leh. Best Snow Majarafad oo dhan waa tayada damaanad qaaday. Waxaan nahay Shiinaha Asal Factory ee Snow qaadada Majarafad . Haddii aad qabto wax su'aal ah, fadlan si xor ah u nala soo xiriir.
Previous: Aluminum geed xamili Long Pruner la arkay Blades
Maanku Snow Majarafad
Majarafad Snow hagaajin karo
Aluminum Snow Majarafad
Buusmeynin Snow Majarafad
Custom Ice xoqo Oo Snow Majarafad
Garden riix Snow Majarafad
Kuleelka Snow Majarafad
Ice xoqo Oo Snow Majarafad
Light Miisaanka Snow tuurid
Maual Snow Majarafad
Si loosoo celiyo caaga Snow Majarafad
Caaga Snow Majarafad la jabin karin
Caaga Snow majarafadihii
Saqafka Snow Majarafad
Snow laabi Majarafad
Snow maandooriyayaasha Majarafad
Snow Majarafad Blades
Snow Majarafad Waayo, Car
Snow Majarafad Long xamili
Snow Majarafad caaga
Tools Majarafad Snow
Majarafad Snow iyadoo gacanka hagaajin karo
Majarafad Snow iyadoo gacanka Steel
Majarafad Snow Iyadoo Laba ka qabtaa
Snow Majarafad Iyadoo Wheels
Telescopic Car Snow Majarafad
Tools Si falin Snow The
Winter Car caaga Snow Majarafad
Xamili Steel Poly Snow qaadada
Aluminum Snow maandooriyayaasha la Wheels
Culus oo Duty Snow Majarafad la Wheels
Maraan Ice xoqo la xamili Wood
Kids caaga Snow Majarafad la xamili steel
Maandooriyayaasha Snow la Wheels